Sheekada Cabdiraxman Hussien: Tahriibiyayaasha waxay ahaayeen ayy dharkii iddaha xidhan
Cabdiraxmaan wuxuu ku noolaa magaalada Hargeysa, Soomaaliya markii uu bilaabay inuu ka masayro asxaabtiisa Yurub aaday. Waxay u sheegayeen in noloshu jirto wax cajiib ah, oo uu doonayay inuu ku biiro. Isaga oo la socda qaar kale oo dhalinyaro ah, wuxuu la xiriiray nin wax tahriibiya oo diyaariyey safarkooda Itoobiya, Suudaan, iyo Liibiya. Bilowgii, safarku wuxuu ahaa mid sahlan oo tahriibiyeyaasha ayaa saaxiibtinimo leh oo caawimaad leh.
Sheekada Fathia: Ka badbaadinta dadka aad jeceshahay silica iyo dhimashada
Wuxuu yidhi, “Hooyo, waxaa i haystayaal tahriibayal!” Markii aan maqlay inaan ku dhawaad dhintey. Waan ogaa waxa ay taasi ka dhigan tahay iyo inaanan awood lahayn.
Hassan waa ka warhayay dhibaatooyinka la xiriira tahriibka balse waxa uu go’aansaday in uu nasiibkiisa tijaabiyo. Qoyskiisu kuma taageerin go’aankiisa tahriibka, waxay isku dayeen in ay kaga digaan balse go’aan ayuu gaaray. Waxaa madaxa ku hayay natiijada iyo nolosha sare ee uu heli doono.
Ka soo badbaaday jirdi
“Waan la wada soconaa dhibaatooyinka ka jira Somalia, waxaa ka jira labo dhibaato oo kala ah, dagaalo iyo aano qabiil,” ayuu yiri Mohamed. “Waxaan u soo baxay labadaan dhibaato, dagaalada iyo qabiilka” ayuu ku daray.